Ogaden News Agency (ONA) – Weerarada Budhcad-Badeedda Galbeedka Afrika oo Laba Jibaarmay.
Weerarada Budhcad-Badeedda Galbeedka Afrika oo Laba Jibaarmay.
Weerarada hubeysan ee lagu qaaday maraakiibta maraya badaha Galbeedka Afrika ayaa laba jibaarmay, sanadkii la soo dhaafay. Budhcad badeedda ayaa sare u qaaday weerarada ka dhanka ah shaqaalaha maraakiibta, sida ay sheegtay hay’adda la socodka hawlaha burcadda badda ee OBP.
Warbixintan cusub waxaa lagu xusay 95 weerar in ay ka dhaceen gacanka Guinea sanadkii 2016-kii, halka 54 weerar ay ka dhaceen isla gacankaasi sanadkii hore.
Xatooyada alaabta waxaa hadda badalay afduubka shaqaalaha oo 96 gaartay, sanadkii ka horeeyayna ee 2015-kii 44 qof oo kali ah ayaa la afduubtay, sida ay xustay OBP. Hay’addu waxay ku qiyaastay dhaqaalaha ku baxay burcadda badda Galbeedka Afrika ku dhawaad $794 milyan.
Weerarada dhawaan ka dhacay xeebaha Soomaaliyana waxay dhanka kale muujinayaan in dib ay u soo laba kacleeyeen burcad badeedda Bariga Afrika taas oo ka dhalatay feejignaan yaraanta, sida ay qabaan qorayaasha warbixintan.
Maisie Pigeon, oo ka mid ah qoraayaasha warbixinta OBP, waxay sheegtay in madaxfurashada ay u tahay qaab ay burcadda ku sameyn karaan hanti si dhib yar.